ကလေးများကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခြင်းအတွက် မည်သို့ကာကွယ်တားဆီးကြမည်နည်း ?
နှစ်စဉ်ကလေးငယ် ထောင်ပေါင်း ရာနှင့်ချီ၍ မတော်တဆထိခိုက်အနာတရဖြစ်ခြင်းကြောင့် အသက်သေဆုံးနေကြရသည်။ အသက်သေစေ နိုင်လောက်သည့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာမဟုတ်သည့် မတော်တဆဖြစ်မှုများကြောင့် သန်းနှင့်ချီသောကလေးများသည် ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်ကုသရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိသူအများစုမှာ ရာသက်ပန် မသန်မစွမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ဦးနှောက်ပျက်စီးခြင်း ဒဏ်ရာများဖြင့် ကျန်ရှိနေကြရသည်။
အဖြစ်များသည့် မတော်တဆဖြစ်မှုများမှာ ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ခြင်း၊ အသက်သေစေနိုင်လောက်သည့် ဒဏ်ရာမဟုတ်သည့် ရေနစ်ခြင်း ( တစ်ခါတစ်ရံ ရေနစ်လောက်သည့်နီးပါးအခြေအနေအထိ ရည်ညွှန်းသည်) အပူလောင်ခြင်း၊ လိမ့်ကျခြင်း နှင့် အဆိပ်မိခြင်းများ ဖြစ်ကြသည်။
မတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အားလုံးနီးပါးမှာ ကာကွယ်တားဆီး၍ ရနိုင်ပါသည်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းမှ မည်သို့ကာကွယ်တားဆီးကြမလဲ ?
၁။ အကယ်၍ မိဘများနှင့် အခြားပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေသူများက ကလေးငယ်များကို အသေအချာထိန်းကျောင်းပေးခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းသည့်ပတ်ဝန်းကျင်များကို စီစဉ်ပံ့ပိုးပေးထားပါက ပြင်းထန်သည့် မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု အများအပြားကို ကာကွယ်တား ဆီး၍ ရနိုင်ပါသည်။
၂။ လမ်းမပေါ်သို့မဟုတ် လမ်းမအနီးဝန်းကျင်များသည် ကလေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ကလေးများသည် လမ်းမအနီးအနား သို့မဟုတ် လမ်းမများပေါ်တွင် ဆော့ကစားရန် မသင့်ပါ။ လမ်းမအနီးအနားတွင် ရှိနေစဉ် သို့မဟုတ် လမ်းဖြတ်ကူးစဉ် သူတို့နှင့်အတူ အသက် အရွယ်ကြီးသူ တစ်ဦးဦးရှိနေရပါမည်။ ကလေးများ စက်ဘီး သို့မဟုတ် မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးလျင်လည်း ဦးထုပ်များနှင့် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ် များကို ဆောင်းထားပေးရပါမည်။ မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် လိုက်ပါလာပါကလည်း ကလေးငယ်များကို သူတို့၏အသက်အရွယ်နှင့် သင့်လျော် သည့် ခါးပတ်ကြိုးများ ပတ်ထားပေးရပါမည်။
၃။ ကလေးငယ်များကို ရေထဲတွင်ထားပါက ၂-မိနစ်မပြည့်မီ ရေနစ်နိုင်ပါသည်။ ရေတိမ်နေသော သို့မဟုတ် ရေနည်းသောနေရာများတွင်လည်း ရေနစ်နိုင်ပါသည်။ ရေချိုးကန်အတွင်း၌ပင် ရေနစ်သွားနိုင်ပါသည်။ ကလေးငယ်များကို ရေထဲ သို့မဟုတ် ရေနှင့်နီးသောနေရာများတွင် တစ် ယောက်တည်း မထားခဲ့ပါနှင့်။
၄။ ကလေးများကို မီး၊ မီးဖို၊ ပူနေသောအရည်နှင့် ပူနေသောအစားအစာများ၊ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးများနှင့် လွတ်ကင်းရာနေရာများတွင် ထားခြင်း အားဖြင့် အပူလောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
၅။ ကလေးငယ်များအတွက် လိမ့်ကျခြင်းသည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။လှေခါးများ၊ ၀ရံတာများ၊ အိမ်အမိုးများ၊ ပြတင်းတံခါများ၊ ကစားသည့်နေရာနှင့် အိပ်သည့်နေရာများကို ကလေးများလိမ့်မကျစေရန် လုံခြုံစိတ်ချစွာစီမံထားရှိရပါမည်။ ကလေးများကိုလိမ့်ကျခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ဒေါင်လိုက်တိုင်များကို အတားအဆီးအဖြစ် ကာရံတပ်ဆင်ထားရပါမည်။
၆။ ဆေးဝါးများ၊ အဆိပ်ရည်များ၊ ပိုးသတ်ဆေးများ၊ အရောင်ချွတ်ဆေးများ၊ အက်ဆစ်၊ ဓါတ်မြေသြဇာအရည်များနှင့် ရေနံဆီကဲ့သို့သော လောင်စာဆီများကို ကလေးသူငယ်များ မမြင်နိုင်သည့်၊ လက်လှမ်းမမီနိုင်သည့် နေရာများတွင် သေချာစွာထားသိုရပါမည်။အန္တရာယ် ကြီးမားသည့်ပစ္စည်းများကို ခွက် သို့မဟုတ် ဘူးများတွင် သေချာစွာသိုလှောင်ထားပြီး ထင်ထင်ရှားရှားအမှတ်အသား ပြုလုပ်ထားရပါမည်။ သောက်ရေဘူးများနှင့် လုံးဝထည့်မထားရပါ။ အဆိပ်သင့်စေသောပစ္စည်းများကိုထည့်ရန် ကလေးများဖွင့်၍မရနိုင်သော ပုလင်း/ဘူးများကိုသာ အသုံးပြုပါ။
၇။ ဓားများ၊ ကပ်ကြေးများ၊ ချွန်ထက်သောအရာများနှင့် ဖန်ကွဲစများသည် ပြင်းထန်သောထိခိုက်အနာတရကို ဖြစ်စေပါသည်။ဤပစ္စည်းများကို ကလေးများ လက်လမ်းမမီနိုင်သော နေရာများတွင် ထားရှိရပါမည်။ အသက်ရှုမွန်းကြပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည့် ပလပ်စတစ်အိတ်များကို ကလေးငယ်များနှင့် ဝေးသောနေရာများတွင် ထားရှိရပါမည်။
၈။ ကလေးငယ်များသည် ပစ္စည်းများကို ပါးစပ်အတွင်းသို့ ထည့်လိုတတ်ကြသည်။ကလေး အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပိတ်စို့မှုကို ကာကွယ်ရန် အကြွေစေ့များ၊ သစ်အစေ့အမာများနှင့် ကြယ်သီးများကဲ့သို့သော သေးငယ်သည့်ပစ္စည်းများကို ကလေးငယ်များ လက်လှမ်းမမီနိုင်သည့်နေရာ များတွင် ထားရပါမည်။ ကလေးငယ်များစားသည့် အစားအစာများကိုလည်း ခပ်သေးသေးနှင့် ခပ်ပါးပါးလှီးဖြတ်ရပါမည်။ သို့မှသာ ကလေးငယ် များ အလွယ်တကူဝါးပြီး မျိုချနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးခြင်းသည် ကလေးများအတွက် အဓိကအရေးကြီးပါသည်။